चिया खानुअघि ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा - Nepali Virals
१३ चैत्र २०७२, शनिबार १३:३६	1,499 पटक-पढिएको
कोही आफन्त अथवा साथीभाई भेट्ने बितिक्कै हामी सर्वप्रथम चियाको अफर गर्छौ । घरमा कोही आयो भने पनि सुरुमा चिया नै ख्वाउछौ । हामी अरु कसैकोमा गए पनि सुरुमा चिया नै खान्छौ । बिहान उठ्ने बितिक्कै चिया खाने धेरैको बानी छ । अझ कतिपय त बेडमै चिया मगाएर खाने गर्छन ।
बिहान चिया, खाना खाएर अफिस पुगेपछि पनि चिया, अनि खाजासंगै पनि चिया, खाजापछि पनि अफिसमा चिया, अनि बेलुका घर फर्किन पनि चिया । यी त अफिस भित्र काम गर्ने कर्मचारीको कुरा । अफिर बाहिर काम गर्नेहरुले त झन् यो भन्दा बढी चिया खान्छन । कोही मान्छे भेट्ने बितिक्कै चियागफ सुरु भैहाल्छ ।
लेमन, ग्रीन टी, मिल्क टी लगायतका आ आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् । तर मान्छेहरु आफ्नो रुची र अरुको लहलहैमा यी चियाहरु सेवन गरिरहेका हुन्छन । चिया पनि एकखाले नशा नै हो । चियाको महात्म्य भनि साध्य छैन । तर यही चिया आफ्नो स्वास्थ्य अनुसार मिलाएर पिउन सकिएन भने यसले ठूलो असर गर्छ । अझ बिहान खाली पेटमा त चिया खानै नहुने अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
एक अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार हाम्रो देशको करिब ८० देखि ९० प्रतिशत जनसंख्या विहान उठ्ने वित्तिकै चिया पिउछन । विशेष गरी गर्मी मौसममा खाली पेटमा चिया पिउदा स्वास्थ्यमा हानि हुने समेत पत्ता लागेको छ । तसर्थ बिहान चिया पिउने नै हो भने तपाईले विहान उठेर हल्का नास्ता खाइ सकेपछि मात्र चिया पिउनु राम्रो हुन्छ ।
चिया खाँदा ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा
१. बिहान खाली पेटमा स्ट्रगं टी पिउन मनपर्छ भने सावधानी अपनाउनुस् । धेरै स्ट्रगं चिया पिउनेलाई अल्सर हुने खतरा हुन्छ । यसले पेटभित्र घाउ बनाउने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ ।
२. कैयौ मानिस एकैपटक धेरै चिया बनाउँछन् । र त्यसलाई पटकपटक उमालेर पिउने गर्छन् । पटकपटक तताएर चिया पिउनु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुनसक्छ ।
३. अधिकांश मानिस दूध चिया पिउने गर्दछन् । तर, कमैलाई मात्र थाहा छ कि खाली पेट दूध चिया पिउँदा चाँडै थकान महसुस हुन्छ । साथै व्यवहारमा चिडचिडापन (रिसाउने) स्वाभाव आदि आउँछ ।
४. विहान उठेर खाली पेटमा चिया पिउदा पाचन प्रक्रियामा अप्ठेरो पार्न सक्छ । जसले तपाईलाई वान्ता हुनसक्छ र अप्ठेरो महसुस हुनसक्छ ।
५. सामान्यतया ब्ल्याक टि लाई स्वास्थ्यको हितमा मानिन्छ । तर, अत्याधिक पिएमा हानी पनि गर्नसक्छ । ब्ल्याक टि पिउँदा तौल घट्छ तर, पेट फुल्छ भने भोक लाग्दैन् ।
अघिल्लो भुलेर पनि जुत्ता लगाएर जान नहुने ७ ठाउँ
पछिल्लो उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई यसरी ध्वस्त पार्ने (हेर्नुस भिडियो)